Ma aha Kitaabka Qudduuska ah in ay haweenka wadaaddadii | Apg29
- Oo aan nin ka mid ah!
axdiga cusub (New Testament) sida wadaaddadii ee Axdigii Hore wuxuu lahaa maalin. Waxaan u tegi kartaa Ilaah iyo xagga Ciise Masiix!
Waxaa jira kuwa ka soo horjeeda dumarka wadaaddadii iyo aaminsan yahay in ay tahay unscriptural. Laakiin xaqiiqada ah waa in ay tahay sida unbiblical by wadaaddadii lab.
axdiga cusub (New Testament) sida wadaaddadii ee Axdigii Hore wuxuu lahaa maalin. Waxay ahaayeen lagu daydo Wadaadka soo socda - Wadaadka Ciise Masiix.
rumaystayaasha oo dhan waa wadaaddadii
Waxaa intaa dheer, maanta wadaaddada yihiin kuwa badbaadayaa iyo dhammaan way rumaysan in Ciise. All aan xiriir la leedahay Ilaah iyo rumaysadka xagga Ciise Masiix. Ma aha oo kaliya koox yar la doortay wadaaddadii axdiga hore u yeedhay.
1 PT 2: 9. Laakiinse idinku waxaad tihiin jinsi la doortay, iyo wadaaddada boqorka, iyo quruun quduus ah, iyo dad Ilaah, inaad naadisaan inuu camal cajiib ah kan idiin yeedhay mugdiga xagga nuurkiisa yaabka leh.
Sidaa darteed, waxa uu noqonayaa mid diirada qalad ku hadlayaan iyo ka dhanka ah haweenka wadaaddada. dood waxay ahayd in la bilaabo haddii ay tahay at dhan kitaabiga ah la nooca wadaadada ku jira kaniisad Swedish sida oo aan ugu yaraan in Catholic ah.
Waxaan si toos ah u tegi kartaa Ilaah
Waxaan hadda ma wadaadkii dunida kasta sida dhexaadin ah si aad u hesho in ay Ilaah. Waxaan u tegi kartaa Ilaah iyo xagga Ciise Masiix! Waxa uu furay jid cusub oo nool xagga iskutallaabta leeyay.
Cibraaniyada 10:19. Sidee Innaguna, walaalayaalow, waxaynu haysannaa dhiirranaan inaynu isagoo geli Quduuskii Quduusyada by dhiigga Ciise, 20 ah waddo cusub oo nool oo uu furay noo banneeyey daaha, in uu yahay, in la yidhaahdo, jidhkiisana by;
Haddaba qof kasta oo aqbali karaan Ciise iyo badbaadi iyo ilmo Ilaah. Ha aad rabto in aad gacaliyahay si ay u aqbalaan Ciise iyo badbaadi haddii aad weli ma aadan samayseen?
Vecka 10, tisdag 9 mars 2021 kl. 05:05